ग’र्भनि’रो’धक औषधी खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? यसाे भन्छन् चि’कित्सक – Dailny NpNews
ग’र्भनि’रो’धक औषधी खाँदा महिलाको तौल बढ्छ ? यसाे भन्छन् चि’कित्सक
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ०३, २०७८ समय: २१:४५:३५
एजेन्सी । ग’र्भ’निरोधको जिम्मेवारी विशेषगरी महिलाकै हुन्छ । यसकारण अनावश्यक गर्भबाट रोक्नका लागि पि’ल्स खान्छन् । लगातार इमर्जेन्सी पि’ल्स खाएपछि महिला आफूमा परिवर्तन महसुस गर्छन् । यसमा अचानक तौल बढ्नु पनि एक हो । महिलाका लागि योभन्दा ठूलो कुरा के होला । त्यसो भए के पि’ल्सले तपाईंको तौलमा वृद्धि गरिरहेको छ ?
होइन । गर्भनिरोध औषधी दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा हुन्छ क’म्बिनेशन पि’ल । यसमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेसटिन दुई प्रकारका ह’र्मोन हुन्छन् । अर्को हुन्छ मि’निपि’ल । यसमा प्रोजेसटिन मात्र हुन्छ । तपाईंको पि’लमा के छ, त्यसबारे खोललाई पल्टाएर पढ्नसक्नुहुन्छ । वास्तविकता यो हो कि यी दुबै पि’ल्सले तौल बढाउँदैन ।
एक चर्चित जर्नल छ, ‘द जर्नल अफ विमिन्स हेल्थ’ । यसमा एक अनुसन्धान छापेको थियो । अत्यधिक तौल भएका महिलामाथि इ’मर्जेन्सी पि’ल्सबारे परीक्षण गरियो । जब नतिजा प्रकाशित भयो तब उनीहरुको तौलमा पि’ल्सको कुनै सम्बन्ध देखिएन । सन् २०१७ मा पनि ४५ शोध गर्भनिरोधसम्बन्धि छापिएको थियो । यी शोधले पनि पि’ल्सले तौल बढ्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसबारे भारतकी डाक्टर अनुराधा शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । उनी फोर्टिस अस्पताल, मुम्बईमा स्त्री’रो’ग विशेषज्ञ हुन् । ‘हो, धेरै महिलाले यही प्रश्न मलाई सोध्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ कि गर्भनिरोधक पि’ल्स खाँदा उनीहरुको तौल बढ्छ र यसको बिकल्पमा के गर्ने,’ उनी भन्छिन् -‘जब तपाईं पहिलो पटक यो पि’ल्स खान सुरु गर्नुहुन्छ तब तपाईंको शरिरमा केही ह’र्मोनल परिवर्तन हुन्छन् जस्तै तपाईंको स्त’न संवेदनशील हुन्छन् र ती सुन्निन्छन् । यो स्त’नको तन्तुमा परिवर्तनका का’रण हुन्छ जसका का’रण तन्तुमा वाटर रिटेन्शन हुन्छ र तपाईंको स्त’नको आकारमा वृद्धि हुन्छ । यसलाई महिलाले तौल बढेको सम्झन्छन् ।’